China ahaziri Adịkwa Christmas Creative 4.3 Inch LCD Display Digital broshuọ video kaadị ekele Kaadị rụpụta na Factory | VideoBrochure
Ahaziri Adịkwa Christmas Creative 4.3 Inch LCD Display Digital broshuọ video kaadị ekele postCard
EKWU LH YOURNANYA Gị: Ka ị na-ede kaadị ọmụmụ maka ndị ị hụrụ n'anya? Gbalịa kwupụta ya, ngwaahịa anyị nwere kaadị ebe nchekwa 1Gb na ihuenyo LCD nke 4.3-7 ”iji mee ka ị gosipụta vidiyo iji kelee enyi gị
AKWUSKWỌ AKW CKWỌ: oghere mkpuchi na ibe dị n'ime ahapụ ọtụtụ ohere iji dee okwu ndị dị n'ime; anyị kwadebere akwụkwọ mmado nke isiokwu dị iche iche maka ịme kaadị a ka ọ bụrụ onyinye pụrụ iche
Mepụta onye ị hụrụ n'anya: n'adịghị ka kaadị ekele kaadị otu oge, kaadị ezumike vidiyo anyị ka arụpụtara nke ọma ma na-eguzogide gburugburu ebe obibi; na-akwụ ụgwọ kaadị ahụ site n'oge ruo n'oge ọ ga-abụ ụlọ ọrụ na-adịte aka
Mfe iji: kaadị a enweghị ike idekọ vidiyo n'onwe ya; nanị iji ya dị ka flash disk, chekwaa vidiyo n'ime kaadị ebe nchekwa ya wee mee; kaadị vidiyo anyị na-akwado usoro vidiyo dị iche iche dịka: MKV, AVI, MOV / MP4, TS, ASF, FLV, PMP, RMVB, MPG / VOB
ANY US NA-EJI: kaadị ekele anyị vidiyo dị mma maka ụbọchị ọmụmụ, ezumike dị ka Afọ Ọhụrụ, Father'sbọchị Nna, Motherbọchị Nne, Onyinye Agbamakwụkwọ; ọbụna kwesịrị ekwesị maka ụlọ ahịa ibu nnukwu efere video maka ndị enyi gị
Vidiyo broshuọ / Kaadị ekele vidiyo bụ nkwakọ ngwaahịa e biri ebi nwere obere ihuenyo LCD, mbadamba PCB, ndị ọkà okwu na batrị lithium na-akwụ ụgwọ yana USB
njikọ na-enye ohere maka mgbanwe nke vidiyo na Imeghari otu. Ihe ntinye vidio ndị a nwere ọtụtụ ojiji: enwere ike iji ha maka mgbasa ozi ahịa na mgbasa ozi.
Ha na-ekwe ka ịkpọ vidiyo vidiyo dị iche iche. Iji bụrụ echiche ka mma, anyị na-echere gị!
1. Mepee kaadị: ike na ga-egwu video na-akpaghị aka. Emechie kaadị, gbanyụọ. Ma ọ bụ pịa bọtịnụ egwu na akwụkwọ nta ahụ iji kpọọ vidiyo ahụ.
2. okirikiri egwu maka ọtụtụ vidiyo ma ọ bụ mee vidiyo 4 nkeji na bọtịnụ 4 dị iche iche maka igosi isiokwu dị iche iche.
3. Nwere ike bulite ọkacha mmasị gị video n'ime kaadị site USB na-ebugote.
4. shapedị, imewe, akụkụ dị iche iche.
5. Site na eriri USB maka nnyefe data na ịchaji, ọ na-akwado ịkpọ vidiyo mgbe ị na-akwụ ụgwọ.
- formatsdị ihe osise: JPG, BMP. Dị vidiyo: AVI, MP4, wdg
- Ihe: Kaadị ekele + ihuenyo TFT + ọdụ ụgbọ USB
- Ikike ncheta: 128 MB-8 GB
- Otu njikwa njikwa ma ọ bụ bọtịnụ ọ bụla na-achịkwa vidiyo ọ bụla
- Mmemme na ọrụ dị iche iche
- Batrị Lithium na-agbapụta agbapụta
- Inye ike: batrị lithium 3.7V batrị batrị ma ọ bụ USB 5V nwere ike itinye na ya
- Okwu: obere ọdụ ụgbọ USB
- Ọrụ usoro: XP / Vista / Windows 7 na na
Katọn siri ike maka mbupu nchekwa: Anyị na-eji katọn ndị siri ike nke ga-edebe ngwaahịa ahụ n'enweghị nsogbu mgbe ị na-ebugharị. Ọzọkwa, e nwere oke ajị anụ pel dị n'etiti ngwaahịa na ngwaahịa iji chebe ngwaahịa ahụ.
Nke gara aga: Airbiotics A5 hardcover Digital Book / Lcd Akwụkwọ nta / Katalọgụ vidiyo Na 7 Inch Screen
Osote: Akwụkwọ ID broshuọ akpụkpọ anụ IDW Portal lcd akwụkwọ mgbasa ozi vidiyo maka mgbasa ozi